राजदरबार हत्याकाण्डको १९ वर्ष पुरा, रहस्य अझै बाँकी
काठमाडौँ । आज जेठ १९, अर्थात् तत्कालीन राजा विरेन्द्रको वंशनाश भएको दिन । विसं २०५८ साल जेष्ठ १९ गते नारायाणहिटि राजदरबारमा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश हुने गरी हत्याकाण्ड भएको थियो । नारायणहिटी दरबारको त्रिभुवन सदनको विलियार्ड बैठकमा भएको हत्याकाण्डमा राजा विरेन्द्र, रानी एश्वर्य, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति, राजा दिपेन्द्र (तत्कालिन युवराज), राजकुमार धिरेन्द्र् (राजा वीरेन्द्रका भाइ), राजकुमारी जयन्ती ‌(राजा वीरेन्द्रकी बहिनी), राजकुमारी शान्ती (राजा वीरेन्द्रकी बहिनी), राजकुमारी शारदा (राजा वीरेन्द्रकी बहिनी), कुमार खड्ग (राजकुमारी शारदाका श्रीमान्) सहित अन्य राजपरिवारका सदस्यहरू मारिएका थिए । विस्तृतमा
डाक्टर केसीको १८ औं सत्याग्रह मंगलबारबाट सुरु हुने
मापदण्ड पालना नगर्ने दुई दर्जन बढी उद्योग र अस्पताललाई कारबाही
काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानूनअनुसारको मापदण्ड पालना नगर्ने र प्रदूषण गर्ने दुई दर्जन बढी उद्योग र अस्पताललाई दण्ड जरिवाना गरेको छ ।
फ्रुटीमा लठ्याउने औषधी मिसाएर १३ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार
राजविराज । बासप्तरीको राजविराज बजारमा एक १३ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएकी छिन् ।
प्रतिताेला एक हजारले घट्याे सुनकाे मूल्य
काठमाडौँ । पछिल्लो डेढ महिनादेखि निकै उतार चढावका बीच कारोवार हुँदै आएको सुनको मूल्यमा आज गिरावट देखिएको छ ।
उठेदेखि नसुत्दासम्म रक्सी, मुसहर पुरुषको औसत आयु ४० वर्ष मात्रै
जलेश्वर । उठ्ने बित्तिकै रक्सी खाने, दिउँसो पनि रक्सी खाने र बेलुका फेरि रक्सी खाएर सुत्ने उनीहरुको दिनचर्या नै हो ।
कटकुवा जङ्गलमा २३ गाई मृत भेटिए, कसले गर्‍याे यस्ताे सामूहिक गाैहत्या ?
सुर्खेत । बाँकेको नेपालगञ्जबाट दैलेखतर्फ लैजान लागिएका गाई वीरेन्द्रनगरमा मृत भेटिएका छन् ।
मृत अवस्थामा भेटियाे भाले गैंडा, कालगतिले मरेकाे अनुमान
भरतपुर । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एउटा भाले गैँडा मरेको छ ।
अदालतले फैसला सुनाएकाे २६ वर्षपछि पक्राउ
काभ्रे । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले वि.सं. २०५० जेठ १९ गते नकवजनी चोरी मुद्दामा कैद तथा जरिवाना गर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि फरार रहेका रोशी गाउँपालिका–७ का ५१ वर्षका नीरबहादुर लामालाई २६ वर्षपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
सुडान घाेटालाका दाेषी शम्भु भारती पक्राउ
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले सुडानमा खटिने राष्ट्रसङ्घीय मिसनका लागि आवश्यक सामग्री खरीदमा भएको घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका शम्भु भारतीलाई पक्राउ गरेको छ ।
नेकपाका नेता भन्छन्ः विषादी हाल्दासमेत फौजी किरा नियन्त्रणमा आउन सकेन
खोटाङ । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा फौजी किराको आतङ्क फैलिएपछि कृषक चिन्तित बनेका छन् । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने नगरपालिकामा लामो समयको खडेरीका कारण सुकेको अन्नबालीको बोट तथा बिरुवा उखेलेर पुनः नयाँ रोपिएका अन्नबालीका बोट तथा बिरुवासमेत फौजी किराले सखाप पारेपछि कृषक चिन्तित बनेका हुन् ।
अछाममा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो
अछाम । जिल्लामा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आत्महत्या गर्नेहरुको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको हो । गत आर्थिक वर्षमा १९ ले आत्महत्या गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चालू आवको दुई महीनामा पनि एक जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ । सामान्य समस्यालाई पनि ठूलो रूपमा लिने र तत्काल धैर्य गर्न नसक्ने समस्याका कारण जिल्लामा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक जनकबहादुर शाहीले बताए ।